"Fa fahafatesana no tambin’ny ota; ary fiainana mandrakizay no fanomezam-pahasoavana avy amin’Andriamanitra ao amin’i Kristy Jesosy Tompontsika. Romana 6:23 Ary amin’izany dia tsy misy fanamelohana ho an’izay ao amin’i Kristy Jesosy." Romana 8:1
Misy zavatra manaitra sy hita fa feno fiandrianana ao amin’ny “Didy Folo”. Saingy ahoana no hampiharana izany, eo amin’ny fiainan’ny tena manokana? Mahatonga saina antsika ny tsirairay amin’izy ireo, mahakasika ny fieritreretantsika, mandinika ny fontsika. “Marina ny fitsipik’i Jehovah, eny, mahitsy avokoa” (Salamo 19:9). Asehony izay tena maha isika antsika lalina indrindra ao. Mandinika ny toetrantsika anaty Andriamanitra. “Ny zavatra rehetra dia mihanjahanja sy aharihary eo imason’Izay iafaran’ny ataontsika” (Hebreo 5:13).
Manoloana ny zavatra hitany, dia tsy manala tsiny antsika Andriamanitra. Mifanohitra amin’izany aza, ambarany fa tsy mety manamarina ny meloka Izy, ary “fahafatesana no tambin’ny ota”. Tsy maintsy tanterahina ny didim-pitsarana. Inona no hatao? Raha isika samirery, dia tsy manana vahaolana mba hahafahana amin’izany.
Nefa tsy mamela antsika amin’izao ny Filazantsara. Niditra an-tsehatra tamin-kamoram-po Andriamanitra, mba hanatanteraka izay tsy haintsika natao. Tsarain’ny Lalàna isika ary ambara fa meloka, kanefa Andriamanitra naniraka an’i Jesosy Zanany, Izay nahavaly tanteraka ny fitakian’ny Lalàna. Mihoatra lavitra noho izany aza, Izy no hany Mpisolo, maty nisolo antsika, mba hizaka ny famaizana sahaza antsika. Tsy eo ambany fanamelohan’Andriamanitra intsony ny mpino, fa voatafin’ny fahamarinan’Andriamanitra. Tsy angatahin’Andriamanitra isika mba hahazo fahamarinana amin’ny alalan’ny asa ataontsika. Fa mandray ny fiainana mandrakizay isika, noho ny asa lavorary nataon’i Kristy, ary manjary mahay mitia an’Andriamanitra sy mifankatia tahaka ny nitiavan’i Kristy antsika: “Ny fitiavana no fahatanterahana ny lalàna” (Romana 13:8-10; Jaona 13:34).